भारतमा लोकसभाको निर्वाचन आजदेखि, कसले मार्ला बाजी ? – Kumbha Khabar
भारतमा लोकसभाको निर्वाचन आजदेखि, कसले मार्ला बाजी ?
भारतमा लोकसभाका लागि पहिलो चरणको निर्वाचन बिहीबार शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए) का तर्फबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ ।
प्रधानमन्त्री मोदीले बिहीबार बिहानै ट्वीट गरी मतदानमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभएको छ । मोदी र उहाँको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले सन् २०१४ को चुनावमा भारी मतका साथ विजयी भएको थियो । भारतमा ३० वर्ष यता पहिलोपटक सन् २०१४ मा एउटै पार्टी भाजपालाई बहुमत प्राप्त भएको थियो ।